အရိုးပွရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့ အရမ်းနောက်ကျနေပြီလား | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အရိုးပွရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့ အရမ်းနောက်ကျနေပြီလား
ကျွန်မက အသက်ကြီးနေပြီ။ အခုအချိန်မှ အရိုးကပွနေပြီပေါ့။ ကာကွယ်လို့ ရပါဦးမလားလို့ သိချင်သူတွေ ရှိကြပါတယ်။
ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကို အစပြုဖို့အတွက် နောက်ကျတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အသက် ဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အမူအကျင့်တွေက အရိုးကို ကျန်းမာစေဖို့ အထောက်အကူပြုမှာပါ။
အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ အရိုးပွတာကို ကြုံတွေ့လာရမှာပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေက အရိုးတွေကို သန်မာစေပြီးတော့ အရိုးပွတာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအမူအကျင့်လေးတွေကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ပါ။ သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ များများပါတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေစားပါ။ ကယ်ဆီယမ်နဲ့ ဗီတာမင် D လုံလောက်ပါစေ။ ဆေးလိပ် မသောက်ပါနဲ့။ အရက်ကို အကန့်အသတ်နဲ့ပဲ သောက်ပါ။
>> ကယ်ဆီယမ်နဲ့ ဗီတာမင် D ဘယ်လောက်လိုအပ်သလဲ?
အသက် ၅၀ နှစ်အောက် အမျိုးသမီးတွေမှာ တစ်နေ့ကို ကယ်ဆီယမ် 1000 mg လိုပြီးတော့ အသက် ၅၀ ကျော် လာရင်တော့ တစ်နေ့ကို 1200 mg လိုအပ်ပါတယ်။ ကယ်ဆီယမ် အလုံအလောက် စုပ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ ဗီတာမင် D 600 IUs ရရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
>> အရိုးပွရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်မယ့် အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ဘာတွေလဲ?
လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အနှေးပြေးခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း စတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေက အရိုးသိပ်သည်းဆကို တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းပေးသလို ကြွက်သားသန်မာစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အလေးတုံး၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ သုံးတဲ့သားရေကြိုး စတာတွေ သုံးပြီးတော့လည်း လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးပါ။ အရိုးသိပ်သည်းဆ စစ်ကြည့်လို့ အရိုးတွေက ပါးနေတယ် ဆိုရင်တော့ လဲနိုင်၊ ပြုတ်ကျနိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို သတိနဲ့လုပ်ပါ။ အရိုးအကြော ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
>> အရိုးသိပ်သည်းဆကို စစ်ကြည့်ဖို့ လို၊ မလို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
Bone density scan/ DEXA scan စတာတွေက အရိုးပါးတာကို အစောပိုင်းအဆင့်ကတည်းက သိနိုင်ပါတယ်။ အသက် ၆၅ နှစ်အထက် အမျိုးသမီးတွေမှာ bone density scan လုပ်သင့်ပါတယ်။ အသက် ၆၅ နှစ်အောက်ပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ချေများတယ်ဆိုရင်လည်း scan လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေများတဲ့သူတွေက မိသားစုထဲမှာ အရိုးပွရောဂါရှိသူတွေ၊ ပေါင် ၁၂၇ အောက်နည်းသူတွေနဲ လက်ရှိ ဆေးလိပ်သောက်နေတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သမားတော်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးတော့ bone density test လုပ်ဖို့ လို၊ မလို ဆွေးနွေးတာကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။